Kedu ihe bụ Mmetụta Marketingzụ ahịa Ahịa Kachasị Mma? | Martech Zone
Kedu ihe bụ Marketingzụ ahịa Marketingzụta Mmetụta Kachasị Mma?
Tọzdee, Nọvemba 9, 2017 Mọnde, Jenụwarị 18, 2021 Douglas Karr
Brian Wallace kekọrịta na History, Evolution, na Ọdịnihu nke Mgbanwe Ọrịa nke ahụ mere ọmarịcha ọrụ nke ịkọwapụta mmetụta ahụ na otu ụdị ndị ahịa si eso ha emekọrịta. Enwere m nkwuwa okwu banyere otu ụdị ndị ọrụ si arụ ọrụ na ndị na-eme ihe ike na nke ọzọ na ekwenyere m na ozi ozi a sitere na Mgbasa Ozi MDG na-arụ ọrụ pụrụ iche n'ịkọwapụta ihe mmekọrịta mmekọrịta ahịa na-aga nke ọma yiri.
Ihe omuma, Steeti nke Azụmaahịa Azụmaahịa: Ihe Ọ bụla Ọ Bụla Ọ Dị Mkpa Knowmara, na-atụle ụzọ kachasị dị irè na ịbịaru ahịa ahịa.
Zọ Mgbasa Ozi Azụmaahịa Kachasị Mma
https://martech.zone/neverbounce-referralNnọchiteanya Na-aga n'ihu - ugbu a, enwere m onye nnọchi anya mba ọzọ na Agorapulse. Ọ nwere ike ịbụ otu n'ime mmekọrịta kachasị mma m nwetagoro na akara. Achọrọ m mmekọrịta na Agorapulse mgbe iwe were m na usoro mgbasa ozi ndị ọzọ mgbe m na-ejikwa ọtụtụ akụkọ mgbasa ozi. Njirimara onye ọrụ na-arụ ọrụ dị ka ndepụta ọrụ ma ọ bụ igbe mbata, ebe ndị otu gị nwere ike ijikwa mmekọrịta dị na mpụga. Njikọ nke iru m na oke agụụ maka ngwaahịa ha mepere ụzọ ebe Emeric na ndị otu ya bịanyere aka na m maka mmemme ndị nnọchi anya gọọmentị. Enweghị nrụgide ọ bụla, na nkwupụta zuru oke, ana m ekwu maka Agorapulse mgbe ndị mmadụ na-achọ ikpo okwu iji jikwaa mgbasa ozi ha.
Nyocha ngwaahịa - Shure zitere m MV88 igwe okwu maka iPhone m ihe dị ka otu afọ gara aga iji nwalee. Ihe m na-atụ anya ya bụ na m ga-ekekọrịta nyocha m n'ịntanetị ma weghachite igwe okwu. Shure ghọtara na ha nwere ngwaahịa dị oke egwu ma chọọ ịzụ ahịa site na pọdkastị nwere mmetụta. Enwere m ịhụnanya nke igwe okwu nke ukwuu nke na m na-aga n'ihu igosi ya onye ọ bụla… wee jụọ Shure ma m nwere ike idebe ya.
Mmepụta Mbufo - Agbanyela bụ ụlọ ọrụ na-enyere ndị azụmaahịa aka idebe nchekwa data email ha nke adreesị nsogbu nwere ike imetụta mmetụta ha na-enweghị ike ịbanye na igbe nke ndị debanyere aha ha. Enwere m otu isiokwu, Kedu ihe kpatara, otu, na ebe iji chọpụta njirimara ịre ahịa Email gị n'ịntanetị, nke a na-agụkarị site n'aka ndị na-agụ ya na ebumnuche ịchọ azịza dịka nke a ka Neverbounce ruru. Mgbe m lere usoro ha na ndị ọzọ ule, amaara m na ha nwere ngwaahịa kachasị mma n'ebe ahụ, yabụ anabatara m onyinye iji gosipụta ọrụ ha na ọkwa ahụ. Anyị, n'ezie, na-egosipụta ngosi zuru ezu.
Omume mkpuchi - Site na mbipụta anyị na obere studio anyị, a na-agwakarị m ka m kpuchie ihe omume iji kwụọ ụgwọ, njem, na mmefu ihe omume. Na ihe omume ahụ, anyị na-ebipụta akụkọ, pọdkastị ndekọ, na-eme Facebook Live sessions, ma na-ebi ndụ-tweet ihe omume ahụ. Enweela m ndị ọrụ iji mepụta broshuọ ndị kachasị mma iji zipu ụlọ na ndị bịara mgbe emechara ya. N'oge na-adịbeghị anya, emere m nke a maka Dell World ebe m sooro Mark Schaefer soro na Podcast Luminaries ha. Ihe omume na ohere dị egwu. Ewezuga ịnọ n’elu ikpo okwu, nke a bụ ụzọ m kacha amasị m iji hụ ọgbakọ!
Inye Ọdịnaya - Agbanyeghị na anaghị m akwado ọdịnaya akwadoro, a na m eche maka ụlọ ọrụ ndị a. Ha aghaghi ibu ndi ndu n’ahia ahia ha ma nye ndi n’agu akwukwo, ndi na ege anyi nti na ndi na-eso uzo uru. Ọ bụrụ na ọ tinye akara m n’ọdachi, agaghị m eme ya. Emegaala m ọtụtụ ụlọ ọrụ kemgbe ọtụtụ afọ n'ihi na enweghị m ike inye ụlọ ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa aka. Ga-ahụkarị ọdịnaya nkwado na ụzọ nke Ihe omume ahia anyi na akuko.
Ndị ahịa na-ekwu na ọdịnaya kachasị dị irè sitere na nkwenye siri ike, ndị nwere mmetụta nwere mmetụta. N'ezie, ekwenyere m na nke a. Ekwenyere m na ndị kwere ekwe nwere mmetuta, nweela ọtụtụ afọ, ikekwe ọtụtụ iri afọ, na-ewulite ikike ha na ụlọ ọrụ ha. Na itinye ego dịka nke a, ọ gaghị adịrị ha mfe ịre onwe ha maka ire ere onye kachasị ahịa. Ekwenyesiri m ike na m nwere ike ịba okpukpu abụọ ma ọ bụ okpukpu atọ m na-enweta ego m na-enweta, ma agaghị m eme ya n'agbanyeghị na ndị na - agụ akwụkwọ m anaghị asọpụrụ m. Ihe m na-akwụ ụgwọ site a ika adịghị tụnyere mgbalị ọ were m wulite m ịtụkwasị obi, m ga-agaghị etinye ya n'ihe ize ndụ.
Steeti nke Azụmaahịa Ahịa: Ihe Ọ Bụla Ọ Dị Mkpa Knowmara
Tags: ahịa ahịainfluencer ahịa infographicinfographicmdg mgbasa ozimgbasa oziala nke ahịa influencer
Ansmụ mmadụ ga-eme nke ọma na Social Media